Ihe mmeghe: Gbanwee Ahịa na Ahịa Ahịa | Martech Zone
Dị ka Aberdeen Group, ụlọ ọrụ ndị na-eme nke ọma na nurturing na-emepụta 50% karịa ahịa dị njikere na-eduga na 33% ụgwọ dị ala. Na ọdịnaya dị ka atụmatụ, dịka 50% nke mmeri ọhụrụ gị nwere ike si na okenye, na-azụlite ụzọ. Ndị ahụ bụ stats dị ịtụnanya na ha na-arụtụ aka n'otu ihe… mee ka ozi ahụ dịịrị ndị na-ege gị ntị ngwa ngwa mgbe ha chọrọ ya, ị na-eme ka ohere gị nke igbanwe ndị ahịa baawanye.
Ngwoolu ome osooso bụ ihe nkwado maka ịre ahịa iji nyere ndị otu na-ere ahịa na ụlọ ahịa ahịa aka ijikwa, hazie ma jikọta ahịa na ahịa ha. Ejikọtara ikpo okwu ya na ụlọ ọrụ CRM ma nye ndị otu ahịa gị ohere iji kwekọọ na atụmanya na ọdịnaya ha chọrọ, ma nyefee ma tụọ mmetụta ya.
Ngwoolu osooso uru na atụmatụ maka Ahịa
Nweta ihe na akụrụngwa dabere na ọnọdụ ahịa site na ngwaọrụ ọ bụla.
Na-arụ ọrụ n'ime gị CRM na ahịa usoro surfacing ego dị ka mkpa.
Jiri ndụmọdụ nkuzi, ndụmọdụ ọkachamara n'okwu metụtara isiokwu, nyocha dị mkpa yana akụrụngwa iji jikọọ na ndị otu ịzụ.
Mee omenala ngosi na akwụkwọ iji kọwaa nghọta na ịkọwa ọdịiche gị.
Nchịkọta ọrụ otu ọrụ ma rụkọta ọrụ na ndị ọkachamara n'okwu a.
Ekekọrịta ihe na ozi na egwu ịzụrụ otu mmasị dabere na nzaghachi omume.
Ngwoolu osooso uru na atụmatụ maka Marketing
Jikwaa ma melite ahịa ahịa nke ọma site na iji ikike nhazi.
Na-akwalite ojiji ọdịnaya yana mkpọsa mmata na ngosi ụzọ.
Mepụta ma jikwaa listi ndị ọkachamara na ngalaba nkuzi na-enye ike ịre ahịa na nghọta dabere na ọnọdụ.
Nweta nzaghachi sitere n'aka ndị otu ọre ahịa na nrụpụta ọdịnaya.
Mepụta ma chịkwaa akwụkwọ dị ike nke enwere ike ịhazi site na ahịa maka ọnọdụ ụfọdụ.
Nweta uzo zuru oke nke ejiri ihe eji eme ihe ma kacha ewu ewu na ahia.
Tags: ngwoolu ome osoosoCRMmarketingihe ahiaire ahia na ire ahiaakwụkwọ ahịaNkwado ire ahịaihe ahia